Cismaan Abuukar Dubbe (jug Soo Dhacayga Muqdisho), Ma Qixi Doonaa Mar Lixaad? Hadduuse Qaxo Halkuu U Qixi doonaa?
Thursday May 20, 2021 - 18:50:01 in Maqaallo
(Cisman Dubbe (Jug soo dhacayga Muqdisho) oo kuyuu ugu jira raashin, hotel ku
yaala Dalka Turkey) Waa Axad la sooman yahay oo bisha April ay ku sii siqaysay gabogabo waana
maalinteeddii 26aad, rasaas xoogan ayaana ka dhacaysay magaaladda Muqdisho oo ay is waydaarsanayaan kuwo taabacsan midowga musharaxiinta iyo kuwo taabacsan Farmaajo ama (Mr Cheese). Kuwa taabacsan mucaaridka waxa ay ka
tirsanaayeen ciidmadda qalabka sida ee dalkaa Somaliya, kuwaasi oo ka soo ruqaansaday agagarkaa gobolka Shabeellaha dhexe, waxaanay fadhiismo ka dhigteen degmooyin ka tirsan gobolka banaadir.
Qaar kalena waa Saadiq John oo laga soo casilay booliska oo toddobaadyaddii ugu danbeeyay fadhiisimo ka dhigtay xaafadda Hodan. Isku soo wada xooriyoo waa
beesha ku abtirsata magaaladda Muqdisho iyo goboladda ku xeeran oo ka hor yimi Farmaajo, ka dib markii ay dhamaadeen afar sanno oo xilkiisii ahaa laakiin ka dhaga
adaygay inuu doorasho qabto ama uu xilka iska dhiibo, isagoo ku dhufsaday shaanbad ay u hayeen aqalka hoose ee baarlamaaanka dalkaasi oo markii ugu
horaysay uu u sameeyay baadari la odhan jiray Mahiinga oo tanzaaniyaan ahaa, kaasi oo woxoogay isa soo badalay laakiin asalkiisii ka yimi Mahiinga sanooyin
badan ka hor.
Haddaba Cismaan Dubbe (Mr Jug Soo Dhacayga Muqdisho) oo ku magacaaban Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaliya oo
dabcan isaga waa Cismaan Dubbe ay Soomaliland-na ugu jirto, ayaa si qiiro iyo kalgacal u weheliyo u aaminsan in Soomaaliyadii burburtay 1991kii. Waa siddii loogu
sheekeeyay isna uu u qaataye, waxa uu maqaal dheer oo uu ku qoray Hadhwanaag News cinwaan uga dhigay "Jidka Dawladnimadda Iyo Jidka Dawlad La’aanta” kaasi oo aanad kala garanayn inuu ka hadlayo Somaliland iyo inuu ka hadlayo Somaliya.
Ninkan muddo ka hor u baxsaday Somaliya, isaga oo is tusay inay somaliland u dhaanto somaliya oo uu yahay mid waddaniyaddu biyo dhigatay ayaa inoo akhriyaya
waxa u dhexeeya dawlad la’aan iyo dawlad. Waxa uu aad ugu dheeraanaya in aan dawlad dhisan la iska dumin isaga oo sarbeebta uu inoo sheegayaa ama fariinta uu dirayaa ay tahay inaan dawladda Farmaajo la dumin.
Waxa kale oo uu maqaalkaa inoogu sheegayaa inuu isaga waa Cismaan Dubbe (Jug Soo Dhacayga Muqdisho e’) uu qaxay shan jeer laakiin inooma sheegin halka
uu ka qaxay shanta jeer iyo cidda qixisay ee sabab u ahayd. Waxaanu inagula hadlayaa Af shinbireed ama Af-Ciyaal aynu ka soo gabownay kuna soo qaadanay ciyaalnimadeenii. Haddaba haddii Cismaan Dubbe naftiisu ugu sheekaysay in
dantiisa khaaska ahi ku jirto Somaliland marka uu ka qaato mushahar aanu waxba
ugu qaban ee ay xukuumaddii Siilaanyo ugu yeedhi jirtay consultant ama la taliye
aan la garanayn waxa uu kala talin jiray Xukuumaddii Axmed Guddi oo beesha Barrigga Burco ka dhigatay Xukuumaddii qaate qaado ama ta Farmaajo marka
yahay Af-hayeen Xukuumadda Farmaajo ama Mr Cheese haddaba maxaynu ka qorraa qofka noocas ah ee la guurguura Title madhan oo ah Wasiir Warfaafinta Xukuumadda Farmaajo ama Consultant Xukuumaddii Siilaanyo iyo mushahar yar
Kaasi oo ah mid aan lahayn qiyaam dadnimo ama waddaninimo aakhirkiina laga daawaday sawiro isaga oo Kuyuu ugu jira raashin uu ka qaadanayo Hotel ah Turkey oo lockdown lagu galaiyay ka dib markii uu ka soo fadhaqsaday Muqdisho isaga iyo xilsuge Kayse oo aan isaga loo Tawaabin wax xila kaasi oo isna Muqdhiso Kabo la’aan kaga soo cararay isagoon Rayska caggaha galin allow maxaa Toobad seeg
meesha ka dhacay Muqdisho ayay ka dillaacday waa war aanu idinka qoray laakiin ku soo gabgaboobay Kabo dacas ah iyo Kuyuu raashin loogu galay Hotel Turkey ku
yaal oo lagaga dhigay Lockdown kaasi oo ku darsoo Mr Cismaan Dubbe (Jug soo dhacaygga Muqdisho) uu eedayn jiray Dalka UK oo ahaa meshii Magangalyadda siisay lixdda jeer ee uu qaxay ee uu inoo sheegay ka dib kaasi oo si indho la’aan ah
ugu eedayn jiray inay Hagardamaynayaan Xukuumadda Farmajo ee uu ka ahaa Wasiirka Wrfaafinta ee Federaalka Soomaliya.
Somaliland ama Somaliya, kolbana meesha uu ka helayo mushahar beena oo uu ku qaato consultant reeraysan. Marka uu joogo somaliland ama xil yar oo loo
magacaabo sidaa ku yahay Somalilander dhab ah, marka tuumbaddu ka baxdo ee ardaagiisii xukuumadda hayay la badalo, isbadalna yimaado uu inoo jeedinaya
lecture ah in midnimadda Somaliland iyo Somalia tahay ta kaliya ee jirta somaliland- na laga daaro Muqdisho.
Ogow ninka noocan oo kale ah Somaliland waxa uu ugu astaysan yahay calooshiisa u shaqayste. Siddii uu madaxwayne Cigaal mar hore oo afka ingiriiska lagu
waraystay ku tilmaamay Ismaaciil Buubaa (mercenary), kaasi oo ka hillaca hadba halka dantiisa khaaska ahi u tilmaanto. Sababtoo ah ma laha qiyaam dadnimo iyo
mid waddaniyeed toona. Haddaba cismaan dubbow Somaliland waa dal madaxbanaan oo aanay habboonayn in aad mar kasta wax anshaxa dawladnimo
kula kufto. Mar walba Farmaajo ayaa waraaq yar ku soo dhiibaya oo ku odhanaya akhri, 2AM mar Jabuuti oo aad maalmo uun ka hor eedaysay iyo Kenya oo aad ka
lulato iyadoo Somaliya u haysa qaxoontiga adduunka ugu badan ee xeryo ku jira
sida Dhadhaab iyo kuwa kale oo la midka ah. Maqaalkana aan u soo noqdo iyo wixii Muqdisho ka taagnaa maalmahan dhawayd
iyadoo la isku adeegsaday rasaasta noocyadeedda kala duwan oo isbahaysigga iyo ciidamadda farmaajo ay is waydaarsanayaan miyaanay ku xusuusinayn 1991-kii, oo
Cali Mahdi iyo Caydiid oo uu Siyaad Barre uga baxay magaaladda caasimadda u ahayd Somaliyaddii hore iyadoo siraadan oo laydh iyo biyaba leh. Muddo dhowr
sanno ah ka dibna isku rogtay magaalo Shaydaan.Markii aan dhameeyay Maqaalkii ayuu Cismaan Dubbe Jug soo dhacaygga Muqdisho ka jawaabay halkii uu u qaxay
mar todobadkii waxaanah noqotay Great Britain oo uu toddobaadyo uun ka hor
eedaymo u soo jeedinayay haysayna muddo dheer isaga iyo Qoyskooddaba waraaqddii Farmajo uu soo fari jiray akhrina ay ku soo gabagaboowday Kabtay
meeday iyo ilaydho siddii Caydho Sablaale loogu galo Kuyuu Hotelo ku yaala Turkey
Beenay waxba ha tarin.
(Dubbe oo internet ka ka baadhaya Wararka iyo halka xaalka Somalia marayo.)
Cismaan dubbe oo ay ka dul shanqadhayaan madaafiic aan wax badan ka duwanayn kuwaas 30-ka sanno ka hor ay isla dhacayeen ayaa marba cid
eedaynaya, Ma somaliland ayaa ugu wacan mise waa mid dhexdoodda ah? waa mid dhexdoodda ah ee bal adigu haddaba Mr Jug Soo Dhacaygga Muqdishow u magac
bixi dagaalka higtiisa iyo damtiisa hurdadda u diiday shacabka Muqdisho bil
Ramadan oo barakaysan gudaheed. Haddaba aan ku soo af-meero maqaalka caawa oo ay Ciid tahay xaggeed ku sugan
tahay? Xaaladaaduna waa sidee Cismaan Dubbow ama Jug Soo Dhacaygga
Muqdishow? iswaydiintuna waxay tahay xaggee ayaad u qixi doontaa markaaaga lixaad? Haddii aad meelo kala duwan ka qaxday shan jeer oo hore dadka reer
somaliland caawa sidaadda ma ay noqon calooshooda u shaqaystayaal waxaanay si nabad iyo caano ah ugu nabdoon yihiin somaliland. Waxaana ay ku ladeen nabad ay
ugu abaal hayaan Eebbe oo kaliya. Mana ilaalinayaan ciiddamo laga soo ururiyay wadamadda afrika oo jaabe jaabe ah. Waxa aad is waydiisaa inaad mar kale u soo
qixi doonto dalkaaggii hooyo ee Somaliland ee aad ka caasiyowday iyo inaad dhulka faranjigga oo aad malaha dhalasho ka haysato u soo qixi doonto? Si kastaba ha noqdo xaalkaaguye anagu waxaanu nahay reer Somaliland oo kaliya ay u hadhay
inay ku guulaystaan aqoonsi caalamiya oo loogu aqoonsaddo inay yihiin dal madax banaan oo aan ka tirsanayn Muqdishaddaa ay dayaanka madaafiicddu kaa dul onkadayso ee ku abshir calooshiisa u shaqayste, dhaaxaan adiga oo kale aragnay
oo kolba meel u dulaama. Bal aan kula dhowro halka uu wakhtigu ku dhigo adiga iyo